Eminyakeni yamuva, cishe njalo nomkhiqizi uzihlomisa izimoto booster yabo ayo. Kungaba noma hydraulically noma kagesi. Uhlobo lokugcina ngenkuthalo isetshenziswa "Kalina" izizukulwane lokuqala nelesibili yasekhaya. On izimoto Ulyanovsk Automobile Plant, okungukuthi, "The Patriot", sebenzisa amplifier zakudala drive wokubacindezela. Kodwa abaningi abazibuza wona othi: kunganjani ukusungula WTP isosha ngoba UAZ kweminye imihlobo? Kwaba njalo ngempela, kukhona eziningi izimoto, iziphi namanje hhayi ifakwe kulolu khetho. Lona "isinkwa" futhi 469 th UAZ, edume okubhekiselwe kubo ngelithi "imbuzi". Esihlokweni lanamuhla sizobheka indlela yokukwenza ngezandla zakhe.
Okwamanje, cishe wonke izimoto isabelomali anemisila le amplifier. Nokho, abanikazi izimoto amadala banesifiso ukuhlomisa umshini noHure. Lena inketho ewusizo kakhulu. Ngisho ne ububanzi enkulu amasondo ayo le imizamo eyenziwayo ukuze ulawule umshini kuyoba ingxenyenamba. Lena kwaphawuleka ngokukhethekile lapho yokupaka emadolobheni ezinabantu abaningi. EGuri ngokwayo limelela ingxenye uhlelo lokuqondisa imoto nokusebenza ogwini uketshezi wokubacindezela okuyinto ukumpompa amaphampu. Kuhlanganisa futhi ikholomu ayo. ifektri ejwayelekile lapha asifanele. Zikhona izinzuzo eziningi zalesi simiso. Eyokuqala - induduzo control, ngoba asikho isidingo eside kangaka ukuvula "amasondo ayo" njengasekuqaleni. Okwesibili - nokwethenjelwa. amandla umfutholuketshezi cishe abupheli. Eyesithathu inzuzo - kalula yesondlo. Phakathi nomsebenzi we imoto enjalo ngeke babe nezinkinga. Ngisho noma amandla ehluleka, ungakwazi ukukulungisa ngezandla zami. Futhi ukushayela nge ukuwohloka egalaji impela force. Into kuphela - ngeke ziwohloka kalula ukuphathwa. Wheel iba "ezisinda" kangaka. By the way, okokuqala-amplifier enjalo ogibele Gorky sika "We-seagull." Gaz-13 kwaba imoto yokuqala nge noHure.
Phakathi nemibi kokufaka amandla ayo phezu UAZ-469 ngezandla zabo Kuyaphawuleka informativeness abampofu eziqondisa ngesivinini phezu amakhilomitha 60 ngehora. Uma kungekho msindo iba stiffer, khona-ke eGuri kalula wasonta, njengoba ngineminyaka engu-10 km / h. Ngakolunye uhlangothi, UAZ - imoto akuyona yamahhashi. Ngakho-ke, uma isabelomali ivumela, lokhu kubuyekeza kwamukelekile. Ukufaka amandla ayo phezu UAZ-469 izimoto angaphandle, kuzonciphisa umthwalo izandla kathathu, ukweqa imigwaqo noma lapho yokupaka in the eduze egcekeni.
Yini esiyidingayo ukuthenga?
Ukuze wenze lokhu sidinga ukuthola ikholomu ayo ngaphansi amplifier kanye futha. Lesi sakamuva ngeke yokwakha kanye nokugcina ingcindezi adingekayo uhlelo lokulawula. I element umsebenzi wenziwa ibhande drive. Futhi, sidinga ithangi isitoreji liquid hoses yokuxhuma. Laba lahlukaniswa izinhlobo - umfutho ophakeme futhi ongaphakeme. Eyokuqala kungaba ukushayela "umugqa ukubuya" ethangini, kanti eyesibili ukhonza for afundwa uketshezi ohlelweni. Ngokuphathelene nenani uketshezi ohilelekile ohlelweni, akusiyo kakhulu. Ukuze ngokwanele Oise 1.2 litre amafutha akhethekile. It ihlukile motor e viscosity nokuthi siqine kangakanani.
Ukuze wenze lokhu, udinga ukususa amasondo ayo. Lapha kudingeka singagcini nje iqoqo okhiye, kanye stripper. ngoba nje isondo is hhayi adiliza. Lokhu kubukeka Puller ngakho: izandla Bare ahlukanisa isondo ngeke kwenzeke - ngakho uzobona kuphela kulimaze ikholomu ayo. Ngemva kokuqeda kukholamu eliphethe kufanele zisuswe kakhulu. Esusiwe ngokuhlanganyela jikelele namantongomane yokuphepha uthayi induku gazinga. Ngaphezu kwalokho unscrewed nuts ezintathu kumphambukisa ilungu. Ngemva kwalokho, nge kaHure ikholomu kushaft ukukhwezwa bipod ikhithi entsha. I last kufanele exhunywe induku ayo futhi uvikelekile nge izikhonkwane. Uma ufaka ikholomu omusha "obuswa eGuri" sizobe ukuvimbela lwemidlalo ubudala. cut wakhe usebenzisa grinders. Ngaphezu kwalokho plastic bezinhlamvu zokuzivikela ogibele ikholomu. Izikulufu efanelekayo ukulungisa emidala. Ngokulandelayo, endaweni bezinhlamvu ezigugile iraba indandatho nut castellated futhi Washer. Penultimate abethela esebenzisa isitebhisi. Phakathi ikholomu ayo bese usetha propshaft encane, okuzokwenza sihlanganise zombili lezi zici futhi enokwethenjelwa adlulisele amandla. Esabalele imbobo isando nhlonhlo (usebenzisa isando, ashaye ukukhanya). On nesigaxa ngentambo ukukhwezwa washers ezimbili - spring evamile. Ngenxa yalokho, ubude we lomnyango kufanele kube amamilimitha angu-300. Ngokulandelayo, ukusonta nut castellated futhi isondo is agibele amahhashi. Steering ikholomu Amandla ayo (UAZ-469 - Tuning luhlobo) ifakiwe ngempumelelo. Kodwa akugcini lapho. Sidinga ukulungisa izingxenye ezisele mshini.
Ukufakwa kwe-futha kanye kwesigubhu
Noma yimuphi amplifier wokubacindezela is eliqhutshwa uketshezi Umfutho. Ukwakha ke, kukhona futha. Kodwa kuyasiza ngokusebenzisa idrayivu ibhande - kusukela isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo crankshaft. Kuyaphawuleka ukuthi kukhona amabhande ezahlukene - ngaphansi WTP isosha at UAZ izimoto ngaphandle kwalo. Sidinga isici eside nangokwengeziwe - wokubacindezela amandla ayo. Ngakho, ukukhipha idrayivu ibhande, umlandeli impeller kanye isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo crankshaft. Ngaphezu kwalokho uyasikrufulula futha amanzi. Bopha kurediyetha emtapwei isondo impeller. Futhi, sidinga amabhawudo side "ku eGuri" UAZ futhi spacer (ngokuvamile iza). A new crankshaft isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo ibhande setha. Futhi, ubakaki fuel isihlungi iyasuswa. Lokhu uyobeka futha. Ubakaki ukuthi kuza Góra, ogibele izikhonkwane futha indawo. Okulandelayo ku-kubakaki fixed futha. Ibha kanye ubakaki eqondiswa locknut. Uma ufaka ibhande kuyadingeka ukusetha ukungezwani lesifanele. Ukulungisa eGuri (UAZ "Simbir" futhi kungenziwa ngcono) kwenziwa tensioning roller okhethekile. Indlela ukucacisa elula evamile? Ibhande akufanele babamba izipilingi. Uma ucindezela kuso ngomunwe wakho, it flexes 10-15 amamilimitha angu, kuyilapho ujikelezisa at engele unelungelo indiza ye isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo. Uma sesisungule amandla ayo ibhande kuya UAZ, setha emuva lemifanekiso nophethiloli. It is fixed umgodi sikwele. Khona-ke thatha esandleni sokuprakthiza futhi sokuprakthiza endaweni kwesokunxele mudguard yenjini izimbobo ambalwa. Zidingeka for axube ethangini nge ketshezi. Lapha sidinga imishudo, amantongomane ngocingo. Lo msuka ixhunywe futha esebenzisa ipayipi lamanzi polymeric. Uhlelo lusebenza ku amafutha ukudluliswa ezivamile. Nalapha futhi, uma ungena ukufakwa lesifanele izingxenye bese uqale imoto.
On the evuthayo injini ugijima isondo twist ayo ngapha nangapha. Esikhathini imizuzwana embalwa yokuqala kwesigubhu adedelwe kanye emoyeni. Uma eqala Foam ke isistimu avuzayo kanye kudingeka afune ukuwohloka. Ngemva ukubekwa uphawu ngokucophelela zonke amapayipi amanzi siqale injini bese uhlole ukusebenza kwe-amplifier futhi. Amandla Steering, UAZ "isinkwa" izimoto angaphandle yehhashi egibele, ukwenza kahle futhi buthule. Ibhande akusho ikhwelo, akukho nokuwohloka we uketshezi ukusebenza. Wena ngokushesha uzizwa ukusebenza kwe-amplifier. Leli sondo is ukuphotha lula kakhulu kunangaphambili. Ngakho, lapho usebenza ovamise okuseleyo ketshezi ethangini plastic. Kumele isipikili up, uma kunesidingo. Ukusebenza amplifier wokubacindezela nge liquid enganele okusongelayo futha ukungasebenzi. Amasondo ayo kuyoba nzima kakhulu.
abanikazi imoto ngokuvamile ukuthenga kits ngomumo eyenziwe yokukhulisa umsindo kusukela Ulyanovsk isitshalo. izindleko yabo ephansi, futhi ukufakwa, lokho akusho ukuthi yinkinga. kits Ready angathengwa ngentengo ruble 20 kuya kwezingu-37. Kodwa nge ukusetshenziswa njalo, ikakhulukazi ngaphandle ezingeni efanele uwoyela, amplifier iqala ukuba Hum. Lokhu kusho ukuthi futha noma idrayivu ibhande ilimele. Ngaphansi ngokwayo Breaks kumphambukisa yokubeka (kungaba iyangena izindawo uphawu). Uhambo nge ukuwohloka is hhayi Kunconywa.
EGuri kusukela "BMW"
Ngokuvamile umbuzo ophakamayo ukusetha WTP isosha (UAZ) ku izimoto angaphandle, okungukuthi BMW lwesikhombisa chungechunge. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi lezi izimoto ezimbili ezihlukene ngokuphelele. Kodwa Intelligence German ngokwanele usebenza Ulyanovsk "imbuzi". Ukuze wenze lokhu, udinga i-futha 130 nesigaxa kanye isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo flat. Lesi sakamuva singabangela dweba kusuka Turner oda. Kuyadingeka umgwaqo we isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo we crankshaft kanye futha. Ezinye isethi dvuhrucheykovy elementi 24 "iVolga". I-tank hoses ukulingana ngokungalungisi. Ezinye izindaba zika-isethaphu alihlukile.
Ngakho, thina esiphethweni kanjani ukubeka izandla zakho phezu wokubacindezela amandla UAZ. Ngemva kwalokhu ukulungisa ngeke ukushayela ngokunethezeka, nokukhathala somshayeli uzokwehla kakhulu. Lokhu kuyasiza kakhulu for Tuning the Suv. Futhi uma ucabangela ukuthi imoto isethwe amasondo emikhulu, amandla ayo iba kumele.
ATVs Russia uyakwazi yini
Chevrolet Niva ( «Chevy Niva") udizili - ukuthi ukuthenga?
Izibuyekezo lomnikazi Mitsubishi Outlander, "uhlelo 2013th
Constellation Aquarius: isikhundla esibhakabhakeni kanye amaphuzu ezithakazelisayo
Yini ukuba aphuze ngalobo Amazing? iziphuzo Ezemidlalo
Imfuyo wemboni kwezolimo ezweni
Into ebalulekile ukuze uqedele Linear iphaneli
Recipe inkukhu kwesibindi pate
Russian Museum of Ethnography Petersburg
Usizo oluyilo ezinkantolo izinwele owomile: ukubuyekeza zokupheka engcono Izibuyekezo
I-TTY ku-iPhone - ukuthi kuyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani?
Alexander Tatarsky - nokuveza Russian